French ခွေးဘီလူးစျေး - ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးပေါက်စတွေဘယ်လောက်ကျသင့်လဲ။ - Breeds
French ခွေးဘီလူးစျေး - ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးပေါက်စတွေဘယ်လောက်ကျသင့်လဲ။
သူတို့ရဲ့ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောမျက်နှာများ, အရွယ်အစားကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မိသားစုဖော်ရွေသောသဘောသဘာဝသူတို့လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များရရှိခဲ့ပါပြီ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော် ။
ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်သောပြင်သစ်ခွေးဘီလူးကို Micro ဟုခေါ်သည်။ သူ၏အပြာရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်မျက်လုံးများကြောင့်သူသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်တန်သည်။
Frenchie ၀ ယ်ခြင်းသည်ဈေးကြီးသောကှဲလှဲမှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ကံကောင်းတာကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးကလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကဘာကြောင့်ကွဲပြားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မခက်ခဲပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး ကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးဤမျှစျေးကြီးသည်?
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးအလိုတော် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ ဒေါ်လာအထိရှိသည်။ လိမ္မော်ရောင်မျက်လုံးသို့မဟုတ် Isabella သားမွေးများပါသောဘူဒိုဇာများသည်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သောသန့်ရှင်းသော Frenchie အတွက်ပုံမှန်ရောင်းဈေးမှာဒေါ်လာ ၂၂၀၀ ဖြစ်သည်။
ကို C- အပိုင်းမွေးဖွား။
မိဘများ၏ pedigree status ကို။
ထို့အပြင်မွေးဖွားသည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်တင်ပါးကိုလုံခြုံစွာမွေးဖွားသည်။ ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးပေါက်စများ၏ ၈၀% ကျော်သည် caesarean အပိုင်းကနေတဆင့်မွေးဖွားကြသည် ။
အမျိုးသမီးများသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သာရာသီသို့ရောက်ပြီးတစ်ကြိမ်တွင်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်နှစ် ဦး သာမွေးဖွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်နှစ်စဉ်ခွေးနှစ်ကောင်မှလေးကောင်အထိသာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်မျိုးပွားမှုအတွက်နှစ်စဉ်ခွေးပေါက်ခြောက်ကောင်မှ ၁၂ ကောင်အထိလျော့နည်းသည်။
နောက်ထပ်မြင်ရမယ့်အကြောင်းပြချက် ပိုမြင့်တဲ့ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ၏စျေးနှုန်းကြောင့်အရောင်ကြောင့်ဖြစ်သည် ။
ပြင်သစ်လူမျိုး ၆၀% ကျော်သည် Fawn နှင့် brindle တို့ဖြစ်ကြသည်။
တချို့ကကုတ်အင်္ကျီ ထိုကဲ့သို့သောအပြာအဖြစ်အရောင်များ သို့မဟုတ် piebald အများကြီးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်မျိုးပွားသူများသည်ဤအရောင်ဖြင့်ခွေးပေါက်များအတွက်ပိုမိုကောက်ခံပါမည်။
ရှားပါးသောအရောင် ၀ ယ်သည့်အခါ Kennel ကလပ်အများစုသည်၎င်းတို့ကိုမသိသောကြောင့်သတိထားပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်အပြာရောင်၊ ရော့စ် (သို့) Isabella ရောင်စုံ pooch ကို ၀ ယ်လိုပါကကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမျိုးဆက်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ခွေးပေါက်စလေးများ (သို့) ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောမျိုးဆက်များသည်သင့်အားစျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူများအနေဖြင့်သူတို့၏မွေးမြူရေးခြံတွင်တင်ပါးဆုံတွင်း dysplasia နှင့် brachycephalic syndrome ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများသည်မျိုးဆက်အတွက်အခကြေးငွေပေးရသည်။
သူတို့ကစိတ်သဘောကိုမိဘများကိုစစ်ဆေးပြီးခွေးမ ၀ ယ်ခင်သင့်အားလာရောက်တွေ့ဆုံရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Piebald အရောင်ပြင်သစ်လူမျိုး (ဘယ်ဘက်ပုံ) သည်သူတို့၏ fawn အရောင်မောင်နှမများထက် (စျေးကြီးပုံကြီး)
ခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်တဲ့အခါသင်မျှော်လင့်ထားသင့်တယ် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ဒေါ်လာအထိကုန်ကျသည် ။ သင်ကျော်ကြားသော pedigree bloodline မှ ၀ ယ်ပါကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ၏စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၇၀၀၀ အထက်ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျ pedigree ခွေးကလေးမွေးစားရန်ရှာလျှင်, စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာအမေရိကန်ခွေးဂေဟာကလပ်ရဲ့နှင့်အတူရှိ၏ မှတ်ပုံတင်မျိုးဆက်များ ။
မျိုးဆက်များသည်မကြာခဏမိဘနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကျန်းမာရေးအသိအမှတ်ပြုမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးမျိုးဆက်၊ သူတို့၏သွေးကြောနှင့်ခွေးပေါက်စများနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်သင့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်လေးပတ်ပတ်လည်တွင်ခွေးတစ်ကောင်ကိုပထမဆုံးသွားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေပုံရသော်လည်းသင်၏ခွေးကလေးဘဝ၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ သူကသူတို့ကိုသူ့အမေ၊ သူသို့မဟုတ်သူမ၏အမှိုက်သရိုက်များနှင့်အတူသုံးရန်အရေးကြီးသည် အရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူပါ ။
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ခွေးပေါက်စများကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်ကာကွယ်ဆေးများကို ၈ ပတ်မတိုင်မီယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ မျက်လုံး၊ နား၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်ရှိစေရမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသောပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ၏စျေးနှုန်းသည်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ထက်အနည်းငယ်ပိုတတ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအလိုတော် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၀ ဒေါ်လာအထိကုန်ကျတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်ယူခြင်း၏အားသာချက်မှာလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းအများစုကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ခွေးအဟောင်းတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်တွေကိုကျိုးပဲ့၊ အချို့သောအခြေခံနာခံမှု ။
လူကြီးများသည်ခွေးပေါက်စများထက် ပို၍ စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်တတ်သောကြောင့်သင့်ဘဝသို့ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအခြေချနိုင်သည်။
ခွေးပေါက်စများနှင့်မတူဘဲခွေးကြီးများအတွက်အသိအမှတ်ပြုသည့်စျေးကွက်များသို့မဟုတ်ခွေးကလေးများကအတည်ပြုထားသောမျိုးဆက်များမရှိပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကမျိုးရိုးလိုက်လူကြီးတစ် ဦး ဝယ်ဖို့ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်။
သင်တစ် ဦး မျိုးဆက်တွေ့ရှိပါကသင်အပြည့်အဝကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုတောင်းသင့်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကျန်းမာရေးပြareနာများမရှိစေရန်၎င်းတို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ဆက်စပ်ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။ Brindle French Bulldog လမ်းညွှန် - ဖတ်ရမည့်အချက် ၅ ချက်
Merle၊ Isabella နှင့် lilac French ဘူဒိုဇာများသည်ပြင်သစ်၊ ဈေးအကြီးဆုံးအရောင်က Isabella ပါ ($ 10,000) နှင့် Merle ($ 8,000) ။ အရောင်နည်းလေကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဖြူ၊ Cream၊ Fawn၊ Tan၊ Black နှင့် Pied ၂၀၀၀ - ၃၀၀၀
Brindle, Black နှင့် Tan 2,500 - 3500
အပြာရောင် 1,500 - 3000
Lilac, Brindle နှင့် Tan၊ Lilac နှင့် Tan တို့ဖြစ်သည် ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀
Merle ၆၀၀၀ - ၈၀၀၀
ရှိပါတယ် တရားဝင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုငါးခု အရောင်များ, တစ်ခုချင်းစီကိုလာမယ့်အဖြစ်ချစ်စရာ! အဖြူရောင်၊ ခရင်မ်၊ အနီရောင်နှင့်အနီရောင်အရောင်များကို American Kennel Club မှအသိအမှတ်ပြုသည်။ မဆိုစင်ကြယ်သောအနက်ရောင်အရောင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
ခွေးကလေးရဲ့အရောင်ကိုသူတို့ရဲ့ pedigree status နဲ့ပေါင်းပြီးဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကနေဒေါ်လာ ၈၀၀၀ အထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
Merle သို့မဟုတ် Isabella ကဲ့သို့ရှားပါးသောခွေးကလေးကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကအခကြေးငွေကိုပေးချေရန်သင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ တာ ၀ န်ရှိသည့်မျိုးဆက်တစ်မျိုးကိုရှာဖွေရန်လည်းအချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများသည်ယူအက်စ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် - ယခုသူတို့သည်နယူးယောက်စီးတီးတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖောက်များဖြစ်သည်!
သူတို့ရဲ့စျေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ ပြင်သစ်များစွာသည်ဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့လက်နက်ချကြသည်။ သို့သော်သူတို့၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်အိမ်အသစ်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်းမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်တွင်အမျိုးစုံသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလည်းရှိသည်။ အကြီးဆုံးသောနေရာမှာပြင်သစ်ခွေးဘီလူးကယ်ဆယ်ရေးကွန်ယက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပြင်သစ်ဘူဒိုဇာကျေးရွာကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းတည်ရှိသည်။
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးအလိုတော်ချမှတ်ခြင်း ခွေးအသက်ပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၅၅၀ မှ ၉၀၀ ကြားကုန်ကျသည် ။ ခွေးတစ်ကောင်ချင်းစီအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအခကြေးငွေမတူပါ။
ခွေးအမျိုးအစားတိုင်းတွင်ကန ဦး ဝယ်ယူခနှင့်အမြဲတမ်းကုန်ကျစရိတ်များရှိသည်။ တစ် ဦး ကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပုံမှန်အားဖြင့် $ 1,500 မှ $ 3000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ် $ 2,200 ၏ပုံမှန်ရောင်းချစျေးနှုန်း ။ သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာကုန်ကျစရိတ်က $ 5,800 မှ $ 12,00 ။
ဒီဖောက်မဝယ်ခင်သူတို့ကိုသင်ငွေရေးကြေးရေးထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အဓိကအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အမိုးအကာမှလက်နက်ချခဲ့သည် ။
ဤခွေးငယ်များသည်သူတို့၏ဘဝအဆင့်တိုင်း၌ပစ္စည်းကိရိယာအသစ်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ အချို့သောပိုင်ရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏သက်တမ်း ၁၄ နှစ်တာကာလအတွင်းဤဖောက်ခွဲမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ အထက်သို့ကုန်လွန်ခဲ့ကြသည်။
ပစ္စည်း ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကြိုးနှင့်ခဲ ၅၀ - ၁၅၀
ခွေးကလေးကာကွယ်ဆေးထိုး 75 - 200
microchipping ၂၀ - ၂၅
စုတ်တံ ၁၀ - ၃၀
ကားထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ၂၀ - ၁၀၀
သေတ္တာ 25 - 500
ခွေးကလေးအတန်းများ 180 - 500
ကုတ်အင်္ကျီ (မိုးကာနှင့် / သို့မဟုတ်အအေး) ၅၀ - ၂၀၀
စုစုပေါင်း 700 - 2,100
အစားအစာ ၂၅ - ၅၀
ခွေး Walker ၅၀ - ၂၀၀
ခွေးလှေးနှင့် Worm ကုသမှု ၂၀ - ၃၀
စုစုပေါင်း 120 - 305
အာမခံ 500 - 1000
နှစ်စဉ် Boosters ၃၀ - ၇၀
VET နှင့်သွားလုပ်ငန်း 300 - 500
စုစုပေါင်း 830 - 1,570
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ဤဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပထမဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။
ဒီခွေးတစ်ကောင်အတွက်လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်တွေဟာသူတို့လိုပဲသိသိသာသာဖြစ်လာနိုင်တယ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ၏အန္တရာယ် ။
သင်၏ Frenchie အတွက်လမ်းလျှောက်နိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်သည့်အခါကြိုးလိုအပ်သည်။
ဒီမျိုးပွားခြင်းသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်နိုင်ပြီးကော်လာမှတစ်ဆင့်သူတို့၏လည်ပင်းပေါ်တွင်ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကို Y-shaped ပုံစံဖြင့်ရှေ့ဆက်သွားခြင်းသည်သူတို့၏အလေးချိန်ကိုရင်ဘတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပြန်လည်ခွဲဝေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ခွေးကလေးသည်ပထမလအနည်းငယ်အတွက်အလွန်စွမ်းအင်ပြည့်ဝလိမ့်မည်။ အိမ်တွင်း၌ဖျော်ဖြေမှုများစွာပြုလုပ်ပေးခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်ခွေးများအတွက်အလွန်ပင်ပန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ဦး နှောက်ဂိမ်း၊ နှင့်လှည့်ကွက်လေ့ကျင့်ရေး သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွထားရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ထပ်စဉ်းစားရမည့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ VET နှင့်သွားစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ကုသမှုတွင်ထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ကျနိုင်သည်။ သင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံကိုမယူရန်ရွေးချယ်လျှင်သင်၏ခွေး၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်တတ်နိုင်သည်သေချာအောင်လုပ်ရမည်။ သွားကုထုံး၊ spaying or neutering နှင့် flea နှင့် worming treatment အတွက်လည်းပိုက်ဆံဖယ်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကံကောင်းတာကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများဟာဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအင်္ကျီတို့ကြောင့်သူတို့မှာ g ည့်သည်တွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားခြင်းမရှိပါဘူး Poodles လိုပဲ ။
သို့သော်သူတို့သည်ပုံမှန်သန့်စင်ရန်လိုသည်။ သင်၏ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများအတွက်ရော်ဘာဖြီးလိမ်းဆေးဖြီးကိုဝယ်ရန်ကောင်းသည် - ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်ပတ်သတ်လျှင်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်။
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးခွေးတစ်ကောင်၏တန်ဖိုးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၂၀၀ ဖြစ်သည် စျေးနှုန်းများ $ 1,500 နှင့် $ 3000 အထိအတူ။ အကြီးတန်းပြင်သစ်လူမျိုးများသည်ခွေးများထက်ဈေးသက်သာပြီးမွေးစားရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကုန်ကျသည်။
Micro သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအကြီးဆုံးပြင်သစ်ခွေးဘီလူးဖြစ်သည်။ သူ၏ရှားပါးသောအပြာအရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်မျက်လုံးများကြောင့်သူသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသည်။
သူတို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အလိုက်အထိုက်နေတတ်ပြီးအလွန်ချစ်စရာကောင်းသော်လည်းစျေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးပြwithနာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်။ သူတို့ဟာမည်သူမဆိုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးတိုက်ခန်းနှင့်ဆင်ခြေဖုံးဘဝနှစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကောင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားခြင်း။
သင်၏အောက်ပါထင်မြင်ချက်များတွင်သင်၏ French Bulldog အတွက်သင်မည်မျှပေးဆပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
The Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောမှုအတွက်လမ်းညွှန်
German shepard တစ်ဝက် husky တစ်ဝက်
black labrador နှင့် golden retriever ရောမွှေပါ
blue heeler mountain cur ရောနှော